Maamulaha Guud ee Sleepout London: Noloshii Dhaxanta Kharaar Beddelaysa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Waajib ah » Maamulaha Guud ee Sleepout London: Noloshii Dhaxanta Kharaar Beddelaysa
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
by Elisabeth Lang - qaasatan eTN
Henrik Muehle, Maareeyaha Guud ee Flemings Hotel ee London Mayfair, ee CEO Sleepout
Written by Elisabeth Lang - qaasatan eTN
Hogamiyeyasha ganacsi ee ugu naxariista badan London waxay sariirahooda iska daayeen hal habeen oo ah Noofambar 22 si ay u seexdaan Lord's Cricket Ground, iyagoo lacag u ururiyay dadka hoy la'aanta soo food saartay jiilaalkan.
"Caawa waa habeenkaygii," ayuu yiri Henrik Muehle, maamulaha guud ee Flemings Hotel ee London Mayfair. "Waxaan xirxiray boorsadayda hurdada oo waxaan xidhi doonaa dhar diiran oo badan si aan u seexdo habeenka qabowga daran ee Lord's Cricket Grounds ee St. Johns Wood Road, London, si aan u muujiyo midnimada dadka baahan."
Bianca Robinson oo ka socota Lords Cricket Ground ayaa tiri: “Xidhisku waa nagu adkeyd dhammaanteen. Laakin qiyaas haddii aadan haysan guri, sariir, cunto la'aan, iyo meelna aadan ku dareemin ammaan.
"Dhibaatadani waxay keentay in dad badan ay waddooyinka u soo baxaan maadaama ay waayeen shaqooyinkoodii, oo ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan kiradoodii, oo ay ku dhibtoonayeen quudinta qoysaskooda. Qaar baa awooday in ay isticmaalaan qolalka huteelka ee madhan, laakiin taageero joogto ah la'aanteed, waxay ku soo laaban doonaan waddooyinka. Waxay u baahan yihiin caawimadaada. Waxaad la seexan doontaa milkiilayaasha ganacsiga, hawl-wadeennada, iyo xirfadlayaasha sare, iyo hoggaamiyeyaasha dhammaan noocyada kala duwan, dhammaan ku dhiirranaaya waxyaabaha bannaanka seexanaya si ay kor ugu qaadaan wacyiga iyo dhaqaalaha, qof kasta oo ballan qaadaya inuu ururiyo ama ku deeqo ugu yaraan £2,000 si loola dagaallamo hoyla'aanta iyo faqriga. London. Habeenkii aad la seexato asxaabtaada xagga Rabbi waxay bedeli kartaa nolosha."
Maamulaha Guud ee Seexda iyadoo ku dhawaad ​​100 kaqeybgale ah ayaa la qabtay ka dib markii dib loo dhigay laga bilaabo 2020. 2019, hurdadu waxay ku dhiirradeen qabowga waxayna kor u qaadeen £ 85,000 oo cajiib ah hay'adaha samafalka maxalliga ah.
Henrik Muehle iyo Hillary Clinton
Henrik Muehle waa mid ka mid ah lacag-ururinta ugu weyn ee maamulaha guud ee hurdo-ururinta. Toddobaadyadii mugdiga ahaa ee sannadkii hore markii masiibadadu ku dhufatay London, oo hudheellada iyo makhaayadaha, dukaamada qaxwaha, iyo baararka ay xidheen xidhidhooyin dheer, wuxuu ku karinayay curries (300 oo cunto) jikada hudheelka agoonta ee hoylaawayaasha. Caadi ahaan, wuxuu ku leeyahay makhaayadda ORMER Mayfair ee Michelin Star cunto kariye, laakiin intii lagu jiray xannibaadda, ma jirin shaqaale, ma jirin cunto kariye, iyo marti ku sugnaa hudheelka. Waxa uu ku qasbanaaday in uu u soo guuro hudheelka isaga oo wata dhawr qof si ay wax walba u socdaan una badbaadiyaan.
Waxay ahayd wakhti aad u xun taas oo ka dhigtay shaqaale badan oo hudheel iyo makhaayado ah oo ku yaala London oo dhan shaqo iyo dakhli la'aan. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ma aysan waayin shaqooyinkoodii oo keliya ee sidoo kale waa ay waayeen guryahoodii maadaama ay awoodi waayeen in ay iska bixiyaan kirada oo ay hurdo daran ku seexdaan. Muwaadiniinta Midowga Yurub kuma laaban karaan dalalkooda maadaama aysan jirin wax duulimaad ah ama adeeg tareen oo dib ugu laabanaya qaaradda.
Markii uu socod dheer ku dhex maray waddooyinka cidlada ah ee London, Henrik Muehle waxa uu helay bangiyada cuntada habeenkii oo uu isla markiiba go'aansaday inuu caawiyo. Qaar badan oo ka mid ah shaqaalihiisii ​​hore ayaa ku farxay inay taageeraan. Wadajirka weyn ee bixinta cuntada iyo cabitaannada kulul ee bangiga cuntada ee ku yaal fagaaraha Trafalgar ee u dhow ayaa ahaa wax cajiib ah. Henrik waxa kale oo uu soo abaabulay bacaha cuntada ee M&S kuwa u baahan.
Wuxuu u qalmaa bilad, ayuu yiri Frances Smith, London. Si buuxda ayaan u aqbalay oo aan rajaynayno in qofna aanu hargab ku dhicin ka dib marka uu ku seexdo hawada qabow ee Lord's Cricket Grounds.
Maxay muhiim u tahay?
The riyo guri la'aan waxaa la kulma 250,000 oo qof kuwaas oo maalin walba jooga UK. Daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujinayaan runta naxdinta leh ee ku xeeran guri la'aanta England.
Waxaa aasaasay 2015 guddoomiye Andy Preston, dhacdooyinka Sleepout ee madaxa fulinta ayaa lagu qabtay UK oo dhan, oo ay ku jiraan 8 dhacdo oo hurdo ah oo imanaya sanadkan. Sleepout ayaa lagu qabtay garoonka Lord's Cricket Ground ee ku yaala waqooyi galbeed ee magaalada London, waxaana hogaamiyayaasha ganacsiga ay seexdeen mid ka mid ah habeenada ugu qabow sanadkan si ay lacag u ururiyaan iyo wacyi galinta dhibaatooyinka saboolnimada ee sii kordhaya ee UK.
"Jawiga habeenkii wuxuu ahaa mid cajiib ah, inkastoo qabowgu jiro, annaga oo ogaanay inaan caawineyno dadka gobolka oo dhan ayaa abuuray dareen diiran," ayuu yiri kaqeybgale.
Maxaan ka naqaanaa hurdo xun oo London dhexdeeda ah?
11,018 qof ayaa la diiwaangeliyay inay si xun u seexdeen caasimadda 2020/21. Xogtan, oo ka timid Maamulka Weyn ee London, ayaa daba-gal ku samaynaysa hurdayaasha qallafsan ee London ee ay arkeen shaqaalaha wacyigelinta. Tani waa koror 3% ah marka loo eego wadarta 10,726 qof ee la arkay sanadkii ka hor iyo ku dhawaad ​​laba jibaarkii 10 sano ka hor. Guud ahaan 11,018 guud ahaan, 7,531 waxay ahaayeen hurdo-culus cusub oo aan waligood lagu arag iyagoo jiifa London sanadkan ka hor.
Tirada hurdada xun waxay ka dhigan tahay cidhifka barafka. Kuwa degan hoyga iyo hoyga laguma darin. Sidoo kale dadka ku seexda basaska habeenkii, ka fogaada in ay arkaan ama ka wareegaan sariir ilaa mid kale, ayaa sheegay in Glassdoor.
Elisabeth Lang - qaasatan eTN
Elisabeth waxa ay tobanaan sano ka shaqaynaysay ganacsiga socdaalka caalamiga ah iyo soo dhawaynta waxayna wax ku biirinaysay eTN ku dhawaad ​​20 sano. Waxay leedahay shabakad caalami ah waana wariye socdaal caalami ah.